Business Dashboard - Easy Multi Display - Rindrambaiko Digital Signage
Metrics & KPI Scoreboard Display ho an'ny orinasa rehetra
Asehoy ny valim-panadinanao amin'ny DASHBOARD BUSINESS
Tohizo ny ekipanao ho mifantoka amin'ny tanjona ary hijanona eo ambony ...
Na manana orinasa kely ianao na orinasa lehibe, Easy Multi Display dia manampy anao hampiseho tabilao fandraharahana ary ataovy mifantoka amin'ny tanjon'ny orinasanao ny ekipanao. Asehoy ny mari-pahaizana momba ny varotra, ny fahasalamana sy ny fiarovana ary ny fandinihana orinasa hafa amin'ny fisehosehoana izay misy dikany ho an'ny ekipa iray manontolo.
Amin'ny sary etsy ankavia dia afaka mahita tatitra 3 samihafa ianao PowerBI. Midika izany fa azonao atao ny manafangaro dashboard maromaro amin'ny efijery iray ihany.
Hatsarao ny fampitana vaovao!
Ampifanaraho ny tabilao maro araka izay tadiavinao ary ahodino azy ireo amin'ny tsindry iray! Mivadika tena mora avy amin'ny tabilao ara-bola ny tabilao ara-barotra.
Ankoatr'izay, azo atao ihany koa, amin'ny tsindry iray monja, hanafina ny tsiambaratelo rehetra momba anao ary hiarovana ny angona azonao! Ny "remote control" -ntsika dia miasa tanteraka miaraka amin'ity haitao vaovao ity novolavolaina ho an'ny filanao!
Ary farany, hahazo ny fidirana amin'ny configurations rehetra noforonina teo aloha ianao amin'ny Easy Multi Display!
Sariohatra ho fanamaivanana na fampitomboana ny solaitrabe
Ny Easy Multi Display fanaraha-maso lavitra
NAHOANA NO Mampiasa ny fampisehoana mora MULTI ho an'ny DASHBOARD BUSINESS?
MANDEHANA AMBOLO-TRANO - MANOTAKA NY FARANY
Miaraka amin'ny metrikao sy ny fampisehoana KPI anao tabilao fandraharahana miaraka amin'ny EMD, hampahatsiahivina anao ny tanjon'ny orinasa lehibe indrindra ianao ary ho afaka hamaritra ny hetsika tokony hatao isan'andro.
MISAOTRA NY FAHALAHANAO
Na ny ekipa aza manantona ny fifaninanana na sahirana hatrany, dia ny fampisehoana ireo ekipanao mandroso amin'ny tanjona dia manampy azy ireo hifantoka foana ary hazoto. Asehoy ny mari-pankasitrahana eo akaikin'ny takelakao noho ny antony manosika kely kokoa!
Fantatrao izay lazainy - tsy hita maso, tsy ao an-tsaina. Ny fijerena ny ekipanao ho fijerena misokatra amin'ny ekipan'ny ekipa azy ireo dia manome azy ireo ny fahafahana hahatsapa ho tafiditra sy ny ekipan'ny ekipa!
Afaka mizaha pejy feno amin'ny faritra tsirairay amin'ny fizarana fahitalavitra ianao. Fampisehoana marobe ity.
Ao amin'ny Cockpit Virtual etsy ambany, mifangaro ny fisehoan'ny rindrambaiko marobe PowerBI ary MicroStrategy tabilao hanatsarana ny fanapahan-kevitrao. Misy fomba fijery maso MicroStrategy eo ankavia ary tatitra PowerBI eo ankavanana. Ny fahitalavitra afovoany dia mizara roa amin'ny MicroStrategy sy PowerBI
VAOVAO SUMMER 2021
"Dashboard Manager”Ilay endri-javatra hahatonga ny Desktop anao ho foibe baiko. Miaraka amin'ny EMD dia azonao atao ny mizara ny monitor faharoa amin'ny faritra maro. Misafidiana tatitra isan-karazany PowerBI, MicroStrategy, Qlik, Tableau.
Ny tsiambaratelo dia atao amin'ny alàlan'ny tsindry tsotra eo amin'ny faritra fampandrenesanao. Asehoy na tsy aseho, tsindrio iray fotsiny.
Ampiasao ny fanaraha-maso lavitra any amin'ny faritra fampandrenesana hanovana tanteraka ny fikandranao, manomboka amin'ny fanaovana tatitra ara-bola ka hatrany amin'ny fanaovana tatitra ara-barotra.
Farany, tafiditra ao amin'ny foibem-baovaonao ny fahitana rehetra momba ny orinasanao.
Noho ny EMD Display dia mampahafantatra ny mpanjifanay momba ireo vokatra fiantohana samihafa atolotray izahay. Ny katalain'ny vokatrao dia mihalehibe ary indraindray sarotra ho fantatra. Amin'ny alàlan'ny fanoratana ny masoivoho ataoko ao amin'ny EMD dia ampahafantarina tsara ny mpanjifa ny vokatra sy serivisintsika.
Fiantohana fiantohana, Namur
Tsy mila mpampianatra teknolojia ianao vao afaka mihazakazaka amin'ny Easy Multi Display. Izany no mahatonga ny rindrambaiko ny rindrambaiko fanaovana sonia nomerika tsara indrindra
- Safidy fiteny: anglisy, frantsay, espaniola, sinoa, holandey mandroso ...